10 Xiddig -yaqaanka Ugu Fiican Chennai Sannadkii 2022 | Khibrada Ugu Fiican -
Bogga ugu weyn 10 Xiddig -yaqaanka Ugu Fiican Chennai 2022 | Khibrada Ugu Fiican
Chennai waxaa hore loogu yaqaanay magac kale waagii hore: Madras. Waa caasimadda Tamil Nadu, oo ah gobol Hindiya ah.
Chennai, oo ah magaalo-weynaha sida ugu dhaqsaha badan u koraya magaalo soo koraysa, waxay wajahaysaa wasakh iyo arrimo dhaqaale oo muhiim ah.
Dadka ku nool Chennai waxay u tagayaan xiddigiyayaasha si ay uga caawiyaan dhibaatooyinka noloshooda. Si kastaba ha ahaatee, go’aan xumo awgeed, ma aysan helin natiijadii laga filayay.
Waxaan sameynay cilmi baaris ballaaran waxaanan la nimid liis dhammaystiran oo ah 10 -ka Xiddig -yaqaannada ugu Fiican Chennai sannadka 2022.
Baadhid: 10 -ka Xiddig -yaqaan ee ugu sarreeya Gurgaon sannadka 2022 | Khibrada Ugu Fiican
Waa kuma Astrologer?
Cirbixiye waa qof adeegsada meelaynta meerayaasha, Qorraxda, iyo Dayaxa shaxda dhalashada qofka si uu u sii saadaaliyo mustaqbalka.
Sida caadiga ah, xiddig -yaqaanka wuxuu sameeyaa horoscope xilliga dhacdada, sida dhalashada qofka, wuxuuna fasiraa meelaha kala duwan ee samada iyo meelahooda xilliga dhacdada si uu u fahmo tayada qofkaas.
Xiddig-yaqaanka ayaa si fiican u yaqaan xiddigiska wuxuuna fahamsan yahay in fikraddiisa dhexe ay tahay khariidaynta shaqsiga koonka, oo dhammaantood isku xiran.
Arag sidoo kale: 15 KAALOOYINKA UGU FIICAN BANGALORE 2022
Maxaad u Booqanaysaa Xiddigiste?
Dadku waxay inta badan booqdaan xiddigiyayaasha ku saabsan horoscopes -kooda maxaa yeelay khabiir ku takhasusay cilmiga xiddigiska ayaa ka caawin kara wax ka qabashada arrimaha sida caafimaadka, xiriirka, lacagta, waxbarashada, shaqada, hantida, iyo safarka, iyo waxyaabo kale.
Dad badan ayaa la -taliyahooda horoscope -ka ka helay inay aad waxtar u leeyihiin markay la kulmaan xaalado adag.
Astrology -gu waxay na siin kartaa fahanka maskaxda iyo tayada dadka aan la falgalno maalin kasta.
Tani waxay noo oggolaanaysaa inaan si fiican ula qabsanno awoodaha iyo xaddidnaanta midba midka kale, iyo sidoo kale inaan ka fogaano iska horimaadyada oo aan yareyno saamaynta taban ee kala duwanaanshaha dabeecadda.
Waxaan baran karnaa calaamadaha aan la jaanqaadi karno annagoo dib u eegayna shaxdeenna xiddigiska. Markay timaaddo jacaylka, iskaashi ganacsi, ama saaxiibtinimo, jaantusyada xiddigiska ee laba qof ayaa la isbarbar dhigi karaa si loo arko sida ay isugu habboon yihiin.
Akhri Sidoo kale: 10 Meelood ee Ugu Wada-Shaqaynta Fiican Bangalore Sannadka 2022-ka
Intee in le'eg ayay sameeyaan Xiddigiyayaashu?
Sida daabacaadan (2022), khubarada xiddigisku waxay kasbadaan $ 61,874 sanadkii, sida laga soo xigtay shabakadda Simply Hired.
Tiradani way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran aagagga juquraafi ahaaneed ee astrologist.
Waxa kale oo laga yaabaa inay ku xidhnaato haddii xiddig -yaqaanka uu u shaqeeyo shirkad weyn, uu leeyahay shirkad u gaar ah, ama uu u shaqeeyo sidii madax -bannaan, marka ay dhacdo in mushaharku kala duwanaan karo.
Arag sidoo kale: 10 Meelood ee Ugu Wada-Shaqaynta Fiican Bangalore Sannadka 2022-ka
Mid ma ku baran karaa xiddigiska iskuulka?
Qaadashada koorsooyinka waraaqaha, ka -qaybgalka aqoon -isweydaarsiyada maxalliga ah, iyo ka -helidda waxbaridda khaaska ah xiddig -yaqaanka mid ixtiraama ayaa ah siyaabaha ugu weyn ee lagu heli karo tababar hadda.
Waxaa jira dugsiyo badan oo waraaqaha lagu wada xiriiro. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa suurtogal ahayd in BA laga helo cilmiga xiddigiska kulliyadda Kepler ee Seattle, Washington, ama laba sano oo shahaado ah oo laga qaatay Avalon College ee Gainesville, Florida.
Hadda u gudub 10 -ka Xiddig -yaqaannada ugu Fiican Chennai sannadka 2022.
Akhri Sidoo kale: Xiddigaha Ugu Fiican Hyderabad | 2022 Liiska Buuxa
Dhammaan xiddigaha ku jira liiskan waxaa la barbar dhigay heerarka soo socda:
Si ay si sax ah u saadaaliyaan, waa inay si fiican u yaqaanaan mawduuca Xiddigiska, sannado cilmi baaris dhab ah oo qoto dheer leh.
Waa inay lahaadaan waayo -aragnimo sannado ah marka lagu daro sannado waxbarasho, maadaama ay tani bixinayso waxbarasho xiddigiska oo adag. Barashada oo ay weheliso, waayo -aragnimadu waxay ballaarisaa aragtideeda waxayna ku darsataa muuqaalka iyo quruxda.
Waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado meesha uu xiddig -yaqaanku wax ku bartay iyo macallimiintooda si loo qiimeeyo kartidooda. Waa inaanay iskood wax u baran iyada oo loo marayo barashada buugaagta.
Waa inay haystaan ​​shahaado inay u qalmaan inay ku dhaqmaan sida xiddigis -yaqaanka urur sumcad leh.
10 Xiddig -yaqaanka ugu Fiican Chennai sannadka 2022
#10 Shri Xariiran
#1. Shri Sentil Nathan:
Chennai waxay hoy u tahay xiddig -yahankan caanka ah. Awowgiis-weynaa wuxuu ahaa xiddig-yaqaan caan ah, sidaa darteed xiddigisku wuxuu ka dhex shaqeeyaa qoyska. Senthil Nathan, oo ah nin dhallinyaro ah oo aad u danaynaya cilmiga xiddigiska Vedic, ayaa aad u soo jiitay.
Senthil Nathan wuxuu kasbaday MCA, M. Phil., MA (Astrology), iyo Dibloomada Sare ee Xiddigiska. Wuxuu bilaabay barashada xiddigiska 2005.
Astrology Vedic, Astrology Ashtamangala Prasna, Bhrigu Nandi Nadi Astrology, Astellogy Stellar (KP iyo KB), iyo Akhrinta Kaarka Tarot waa meelaha ugu waaweyn ee Senthil Nathan ee khibradda leh.
Astrologer -kan caanka ah ayaa sidoo kale aqoon u leh Ashtakavarga, Samhita, Prasnam, Thamboola Prasnam, Tajika, Vastu, Muhurta, Shadbala, iyo Astrology -ga reer Galbeedka, si aan u xuso dhowr.
Wuxuu ku jiray bandhigyo iyo doodo telefishan oo kala duwan oo ku salaysan Astrology, isagoo muujinaya khibradiisa dhinaca. Wuxuu ka shaqeeyaa La -taliye Astrologer AstroVed.com, Xarunta Astrology -ga tooska ah ee Hindiya.
Senthil Nathan wuxuu aad u danaynayaa xiddigiska. Wuxuu leeyahay fahan ballaadhan oo dhinacyo badan oo arrinta ah iyo karti la yaab leh oo uu ku sameeyo saadaalin sax ah.
Kumaran waa xiddig -yaqaan Vedic astrologer waana mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican adduunka. Waayo -aragnimadiisa aan caadiga ahayn iyo saadaashiisa saxda ah, waxaa lagu abaalmariyay cinwaanka la jeclaystay ee Jothida Thilagam ee cilmiga xiddigiska ee Akademiyada Cilmi -baarista Univercell ee Chennai.
Kumaran wuxuu ku shaqaynayay cilmiga xiddigiska Vedic muddo 15 sano ah wuxuuna aqoon durugsan u leeyahay mawduuca. Waxa uu ku saleeyaa saadaashiisa iyo daawayntiisa baadhitaan dhammaystiran oo ku saabsan meerayaasha meeraha.
Meelaha uu khibradda u leeyahay waxaa ka mid ah guurka, xiriirka, ganacsiga, xirfadda, caafimaadka, dhaqaalaha, iyo mowduucyo kale oo kala duwan. Wuxuu si fiican ugu hadlaa Ingiriisiga wuxuuna haystaa liis dheer oo macaamiisha ku qanacsan dib -u -cusboonaysiintiisa.
Shastry waa xiddig-yaqaan caan ka ah Chennai. Wuxuu ku qaatay shahaadada koowaad ee ganacsiga ka hor inta uusan go'aansan inuu raaco qalbigiisa oo uu raaco shahaadada koowaad ee cilmiga xiddigiska. Laga soo bilaabo 2001, wuxuu bartay Astrology.
Wuxuu xirfadiisa ka bilaabay maamulka, laakiin shan sano kadib, wuxuu badalay fikirkiisii ​​wuxuuna go’aansaday inuu raaco Astrology. Isagu waa xiddig-yaqaan caan ah oo ku takhasusay cilmiga xiddigiska Vedic-ka wuxuuna ka dhigayaa liiskeenna 10-ka Xiddig-yaqaan ee ugu fiican Chennai sannadka 2022-ka.
Janardhanan waxaa loo arkaa mid ka mid ah xiddigaha ugu sarreeya Chennai. Markii uu jiray 15 sano, wuxuu ogaaday inuu aad ugu dhow yahay Astrology.
Rabitaankiisa ah inuu barto wax kasta oo ku saabsan mawduuca ayaa u horseeday inuu iska qoro iskuul xirfadeedka Xiddigiska.
Wuxuu xubin ka noqday urur sumcad leh waxaana la siiyay magaca Jothida Rathna. Rabitaankiisii ​​ahaa inuu wax badan ka barto arrinta ayaa ah mid aan la demin karin.
Iyada oo ah haweeneydii ugu horreysay liiskayaga 10-ka Xiddig-yaqaannada ugu Fiican Chennai sannadka 2022, Ms.
Aabaheed wuxuu baray aasaaska xiddigiska. Waxay leedahay fahan ballaadhan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada meerayaasha iyo jagooyinka, taas oo ay khuseyso shaxda dhalashada ee dhalashada.
Waxay tixgelisaa saamaynta meerayaasha kale ku leeyihiin calaamadaha zodiac sidoo kale.
Astrologer -kan caanka ah wuxuu isku daraa mabaadi'da xiddigiska ee caadiga ah iyo habab saynis oo casri ah si loo bixiyo saadaasha horoscope -ka saxda ah iyo daaweyn hufan.
In kasta oo aysan ahayn qof ku hadasha Ingiriisiga hooyo, waxay dadka Hindiya iyo dibaddaba kula talisay arrimaha khuseeya caafimaadkooda, waxbarashadooda, mihnadooda, maaliyadda, ganacsiga, iyo xiriirkooda.
Kumar waa astrologer caan ah oo leh shahaadooyin heer sare ah oo ku saabsan cilmiga xiddigiska, cilmi -nafsiga, la -talinta, iyo teraabiyada cilminafsiga.
Waa aqoonyahan leh dibloomaha diblooma ee Horumarinta Shaqaalaha, Hanuuninta, iyo La-talinta. Shri Kumar ayaa sidoo kale ku qaatay shahaadada Bachelor of Arts ee Sharciyada Sharciyada Waxbarashada.
Kumar wuxuu bartay Nidaamka Parasara ee Astrology wuxuuna ku leeyahay maado shahaado iyo shahaado jaamacadeed.
Sababtoo ah rabitaankiisa waxbarasho ee weyn, xiddig-yahankan caanka ah wuxuu adeegsadaa arrimo nafsaani ah si uu u hago macaamiishiisa. Wuxuu bixiyaa talo xirfadeed oo ku salaysan awoodda meerayaasha.
Khibradiisa iyo aragtidiisa baaxadda leh ayaa dhalisay akhrinta iyo saadaasha isla markaaba la xaqiijiyey inay aad waxtar ugu leedahay macaamiisheeda.
Satyamurthy, oo ah astrologer caan ah oo leh khibrad ka badan labaatan sano, ayaa mawduuca laga soo qaatay da 'yar. Xiisihiisu wuu sii ballaadhay maadaama uu wax badan ka bartay awowgiis oo uu akhriyay buugag badan si uu u ballaadhiyo aqoontiisa Xiddigiska.
Astrology-ga Vedic waxaa adeegsada xiddigaha caanka ah si ay uga jawaabaan arrimaha la xiriira guurka, jaceylka iyo xiriirka, xirfadda, ganacsiga, waxbarashada, iyo dejinta. Astroyogi iyo Astrotalk labaduba isaga ayay ku xidhan yihiin.
Satyamurthy waxay si fiican ugu hadashaa Ingiriisiga iyo Tamil -ka, sidaas darteedna waxay la shaqaysaa dad ka kala yimid daafaha dunida oo isku dayaya inay xalliyaan dhibaatooyinka.
Wuxuu ka shaqeeyey ganacsiga bangiyada muddo 37 sano ah wuxuuna aad ugu safray Hindiya iyo dibedda. Wuxuu rumaystaa qaddar wuxuuna u malaynayaa in meerayaashu ay saamayn toos ah ku leeyihiin nolosha dadka.
Xiddig-yaqaanka caanka ah wuxuu sameeyaa saadaalin cajiib ah oo ku saleysan taariikhda, waqtiga, iyo goobta dhalashada.
Mahadevan (haweeneyda labaad ee ku jirta liiska 10 -ka Xiddigood ee ugu Fiican Chennai sannadka 2022) waa khabiir ku takhasusay cilmiga xiddigiska waxayna haysataa shahaadada mastarka maadada.
Waxay ku shaqeyneysay cilmiga xiddigiska Vedic ku dhawaad ​​toddobo sano, akhrinteeda saxda ah iyo saadaasheeda waxay dad badan ka caawisay caafimaadkooda, xiriirkooda, waxbarashadooda, shaqooyinkooda, iyo dhaqaalahooda.
Waxay leedahay faham dhammaystiran oo ku saabsan sayniska rabbaaniga ah ee hore iyo hababka, iyo sidoo kale aaminaad xooggan iyaga. Prasna, isbarbar dhigga, iyo waxsii sheegyadu waa takhasuskeeda.
Ramkumar wuxuu had iyo jeer la yaabi jiray sida dadka tuuladiisu ay u samayn karaan saadaasha cajiibka ah. Intaa ka dib, shucuurtiisu way sii xoogaysatay, wuxuuna doortay inuu u raadsado Astrology xirfad ahaan.
Wuxuu waqti la qaatay gurus caqli badan oo si weyn uga caawiyay barashada sirta iyo mabaadi'da Xiddigiska. Waxa uu ballaadhiyay khibradiisa isaga oo akhriyay dhowr buug.
Xiddig-yahankan caanka ah wuxuu had iyo jeer baranayaa waxyaalo cusub wuxuuna leeyahay waayo-aragnimo badan oo lagu falanqeeyo horoscopes-ka. Astrology -ga Vedic, Prashna, KP Astrology, Soo -jeedinta Dhagaxa, iyo Astrology -ga DNA ayaa ka mid ah takhasusyadiisa.
Wuxuu saadaal ka bixiyaa suuqa saamiyada. Ujeeddadiisu waa inuu gaaro dad badan intii suurtogal ah oo u adeegsado xirfadihiisa iyo aqoontiisa si uu u hagaajiyo noloshooda.
#10 Shri Xarixaan:
Ugu dambayn liiskayaga 10 -ka Xiddig -yaqaannada ugu Fiican Chennai sannadka 2022 waa Shri Hariharan. Xiddig -yahankan caanka ah wuxuu ka soo jeedaa saf dheer oo maxkamad ah Xiddigiyayaasha ku jira maxkamadda boqortooyada ee Travancore, oo soo jiitamaysa saddex fac. Shri Subramanian waa wiilka aasaasaha KP Astrology, Professor KS Krishnamurthi.
Shahaadada Master -ka ee Dhaqaalaha oo uu ka qaatay Jaamacadda Madras, wuxuu xoogga saaray Astrology, oo ah maado xiise gelisay.
Vedic Astrology, Numerology, Xiriirka Guurka, Prasanna waxay ka mid yihiin takhasuska Shri Hariharan. Waxa uu leeyahay siddeed iyo toban sannadood oo waayo -aragnimo ah suunka.
Shri K Subramanian wuxuu ahaa macallinkiisa, wuxuuna baray KP Astrology. Wuxuu macaamiishiisa siiyaa akhrin iyo saadaalin sax ah, iyo sidoo kale daaweyn wax ku ool ah. At Astroved.com, wuxuu u shaqeeyay waqti buuxa sidii xiddigis.
Ka soo horjeedda fikirka khaldan ee caanka ah, yoolka Astrology waligiis ma ahayn wax-sheegid.
Waa in la baaro habaynta meeraha samayska samayska ee la xiriirta waqtiga dhalashada qofka iyo meesha si loo go'aamiyo qaybta saxda ah ee isaga ama iyada loo qoondeeyay inuu ka ciyaaro noloshan oo laga caawiyo isaga ama iyada fulinta hawsha dhabta ah ee nolosha.
Xusuusnow, ma beddeli kartid jihada dabaylaha, laakiin waxaad dooran kartaa meesha aad u socoto, waqtiga ugu wanaagsan ee la bilaabi karo doonta, qiyaasta waqtiga ay qaadan doonto in la tago; ururi sahayda lagama maarmaanka ah, oo deji shiraacyadaada si aad uga faa'iidaysato ogaanshaha jihada iyo xawaaraha dabaysha si aad u qorsheysato sida ku habboon.
Taasi waa waxa Astrology ay rabto inay gaarto. Tixgeli inaad booqato mid ka mid ah Xiddigiyayaasha ku jira liiskan 10 -ka Xiddigood ee ugu Fiican Chennai sannadka 2022 si ay kaaga caawiyaan inaad tan gaarto.
shabakadda.com - 10ka Xiddigood ee ugu Fiican Chennai
xirfadda ciyaarta.com - Astrologer
simplyhired.com - Astrologer
15 Xidigiyayaasheeda Ugu Fiican Delhi | 2022 Faallooyinka ugu Fiican
10 -ka Xiddig -yaqaan ee ugu sarreeya Gurgaon sannadka 2022 | Khibrada Ugu Fiican
Bilawga ganacsiga qorshaynta maaliyadeed waxa ay ahayd riyada inta badan qorshayaasha maaliyadeed. Maqaalkan oo ku saabsan sida…
10 Xayiraadaha Xayeysiinta Bilaashka ah ee Ugu Fiican Bilawga 2022
Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in markaad internetka ka dhex mushaaxeyso, xayeysiisyadu meel walba ka soo baxaan xitaa adigoon gujin...
15ka Siyaabood ee Ugu Sareeya ee Go'aano Wanaagsan lagu Gaadho
Haddaan ogaan lahaa! Kelvin wuxuu ku dhawaaqay… Wuxuu ku dhashay qoyska Clinton iyo cunuggii ugu horreeyay